हिमालखबर बुधबार, चैत २, २०७३
कैलालीमा कृषि, कृषिजन्य उद्योग र कृषि पर्यटनका लागि चाहिने सबथोक छ। यो तालहरूको जिल्ला पनि हो। तिनैमध्येको एक घोडाघोडी तालमा पर्यटक आकर्षित गर्न स्थानीय स्तरबाट सक्दो प्रयास पनि भएको रहेछ। यसमा पर्याप्त लगानी र प्रचार–प्रसार भने हुनसकेको छैन, जबकि यसमा बहुउद्देश्यीय काम गर्न सकिन्छ।
कनकमणि दीक्षित सोमबार, फागुन ३०, २०७३
मरण/हत्या हुनासाथ पनि ‘शहीद’ घोषणा गर्ने माग आउँछ, मन्त्रिपरिषद्बाट रु.१० लाख दिने निर्णय अनि सबै आ–आफ्नो बाटो । तर ढिलोचाँडो जवाफदेही गराइछाड्ने अठोट लिनुपर्छ, सच्चा नागरिकले ।
ग्रामर गुरु: चूडामणि गौतम
२०३७ सालमा प्रकाशित भएर लाखौं प्रति बिक्री भइसकेको चूडामणि गौतमको अंग्रेजी ग्रामर पढ्नेहरूको संख्या बढेको बढ्यै छ।
चूडामणि गौतमको ९४औं पुस्तक हो– 'गौतम नेपाली बगली कोश'। २०३५ सालमा 'आभास' कविता संग्रहमार्फत पुस्तक संसारमा आएका उनको ९५औं पुस्तक 'वर्णविन्यासघातीहरू कानूनको कठघरामा' आगामी चैतभित्र प्रकाशन हुँदैछ।
कनकमणि दीक्षित सोमबार, फागुन २३, २०७३
सम्पदा पुनःनिर्माणमा आधुनिक सामग्री र प्रविधि प्रयोग गर्न मिल्ने वा नमिल्ने बहसमा निकास चाहिएको छ ।
वसन्त महर्जन शनिबार, फागुन २१, २०७३
थाइरोइडको ९० प्रतिशत गडबडी यसको कम कामगराइले हुन्छ। यस्तो बेला राति मज्जाले ९–१० घण्टा सुते पनि थकाइ र आलस्य महसूस हुन्छ। त्यस्तो बेला शरीरका विभिन्न भागमा पानी थेग्रिएर तौल बढ्छ। मूड बिग्रने, अवसाद र चिन्ता लाग्ने हुन्छ। खाना कम नै खाए पनि तौल बढ्ने हुन्छ। जोर्नी र मांसपेशीहरू दुख्छ। थाइरोइडको कामगराइ कम भएको व्यक्तिमा जाडो महसूस हुने, हातखुट्टा चिसो हुने, शारीरिक तापक्रम पनि सामान्य भन्दा कम हुने हुन्छ।
कनकमणि दीक्षित शुक्रबार, फागुन २०, २०७३
आफ्नो चश्मामा रहेको धूलो–दाग पुछौं र हाम्रा नेतालाई फेरि एकपटक नियालौं। अब स्थानीय निर्वाचनद्वारा फेरि मुलुकभर लोकतन्त्र पुनर्जागरण गर्ने हो, र यसका साथ जन्माउने हजारौं हजार भोलिका नेता।
कनकमणि दीक्षित बुधबार, फागुन ११, २०७३
वाइन जस्तै चियाको पनि विभिन्न पहिचान र आयाम हुन्छन्, ग्रीन टी, अर्थडक्स, लिफ् या धूलो मात्र होइन, बिरुवा, मुना र पातले अनि माटो, पाखा, उँचाइ, घाम, पानी र लन्जिट्यूड–ल्याटिट्यूडले पनि फरक–फरक स्वाद र तयारीको तौरतरीका सुझाउँछ।
भ्यालेन्टाइन्स् डे र चुम्बन
हिमालखबर आइतबार, फागुन १, २०७३
'जनयुद्ध' को थालनी भएको वर्ष जन्मेकाहरू २० वर्ष पुगीसके। विडम्बना, उनीहरूले माओवादी विद्रोहले कुनै समानता नल्याएको बरु थिलथिलो पारेको समाजमा संघर्ष गर्नुपर्नेछ।
त्यसमाथि, एक दशक अगाडिको जनआन्दोलनको म्यान्डेटमा सत्तासीन राजनीतिको शीर्ष तह पनि जनभावना भन्दा धेरै टाढा छ।
विहीबार, माघ २०, २०७३
२०११ सालदेखि पत्रकारिता शुरु गरेका पन्नालाल गुप्त 'चाचाजी' २०४६ को जनआन्दोलन, त्यसपछिको सशस्त्र माओवादी विद्रोह र २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा सम्झनलायक रिपोर्टिङमै खटिए। उनी ८८औं जन्मदिन मनाउँदासम्म समाचार लेखन र सम्पादनकै दुनियाँमा छन्।
शरीरको अवसानले साहित्यकारको आयू निर्धारण गर्दैन। ओझा पनि साहित्यप्रतिको अनुराग र कृतिहरुका कारण सधैं सम्झिइरहने छन्।
कनकमणि दीक्षित सोमबार, माघ १७, २०७३
देशमा लिटरेचर फेस्टिभलहरू जति भए पनि पुग्दैन । सल्काउन मात्र सकिए मानव मस्तिष्कमा अपार जिज्ञासा र चाहना छ– फिक्सन र नन्फिक्सन सामग्रीले मात्र यसको माग पूर्ति गर्न सक्दछ ।
छोरा, अब नेपाल बन्दैछ !
दिनकर नेपाल शुक्रबार, माघ १४, २०७३
तिमी आउँदा-आउँदै काठमाडौंमा जताततै धुलोले तिमीलाई स्वागत गर्नेछ। कति पटक तिमीलाई मुखमा मास्क लगाएर यता र उता हिंडाउनपर्दा तिम्री आमा मसँग रिसाउनुहोला ।कति पल्ट मलाई नभने पनि उहाँलाई पछुतो हुनेछ।
यहाँ समस्याहरु धेरै छन् तर, समस्या नभएको त कुन ठाउँ हुन्छ र ? म मान्छु, अहिले भत्केका धेरै कुराहरु मिलाउन पर्ने छ। तर यो बाहेक मेरो अर्को घर छैन बाबु। नेपाल बाहेक मेरो अर्को विकल्प नै छैन!
त्यसैले यहाँ नै मेरो भविष्य खोज्न र यहाँ नै तिम्रो भविष्य खोज्न म वाध्य छु। तिमीलाई यो बाध्यता मेरो 'पागलपन'ले पारेको हो तर यसमा मलाई ग्लानि छैन किनकि मलाई पुरा विश्वास छ छोरा - अब नेपाल बन्दैछ !
दुःख गर्ने, सुखको सपना देख्ने
विष्णु रिमाल मंगलबार, माघ ११, २०७३
दुःख लागिरहेछ, यदि रंगकर्मी विष्णुभक्त फुँयालसँगको यो नै अन्तिम संवाद हुनेछ भन्ने थाहा भएको भए शायद संवाद लम्ब्याउँथे होला । घतलाग्दा कति विषयमा चर्चा गर्थें होला ?
“म त खङ्ग्रङ्गै भएँ । के भन्नु, त्यहाँ आउनेलाई मैले ठटाउने भनेको छु भन्नु ? मैले राम्रो छ, गए हुन्छ भनें र आफू चाहिं लागें होटल अन्नपूर्णमा ।”
शुक्रसागर सोमबार, माघ १०, २०७३
आज विश्वभर लोकप्रिय बनेको पालुंगो पाटनका तेपे अर्थात् व्यञ्जनकारहरूको आविष्कार हो । राजा नरेन्द्रदेवले चिनियाँ बादशाहलाई वाङ्हुयेन्चेको हातमा पालुंगो सौगात पठाएका थिए । त्यही पालुंगो चीनबाट रेशममार्गहुँदै अरब राष्ट्र र यूरोप पुग्यो ।
दूध खाँदा होशियार
राम्रोसँग नउमालेको दूध खाँदा कोलिफर्म (व्याक्टेरिया), भाइरस, फङ्गस (ढुसी) लगायतका कारणले संक्रामक रोग लाग्छ।
गोरखापत्रका पुरेत: कमलमणि दीक्षित
हिमालखबर शनिबार, माघ ८, २०७३
कमल दीक्षित (कदी) को जन्म हुँदा गोरखापत्र (गोप) को उमेर २८ वर्ष भइसकेको थियो, तर कालान्तरमा कदी नै गोपका 'पुरेत' कहलिए।
हिमालखबर बुधबार, माघ ५, २०७३
हिमालखबर मंगलबार, माघ ४, २०७३
डालीबाट कमल झरेर गए पनि वासना फैलिरहेकै छ।
आफू कवि भएकाले मैले कमलमणिलाई सधैं कविताको पक्षबाट हेरें। हुन पनि उनमा कविता बुझ्ने र कवितालाई प्रेम गर्ने एउटा विलक्षण खूबी थियो। उनको त्यो विलक्षण प्रतिभा उर्दू कविताका सन्दर्भमा पनि उत्तिकै देखियो। उर्दू जान्ने भएकोले उनी उर्दू कविताको जानकार र मर्मज्ञ थिए युवावयमै।
कनकमणि दीक्षित मंगलबार, माघ ४, २०७३
यो छोराको आँखाले कमलमणि दीक्षितलाई 'रेनेसान्स पुरुष' देख्दछ, र आधुनिक नेपालको निर्माता पुस्ताको प्रतिनिधि पात्र। त्यति थोरै व्यक्तिहरूको कत्रो ठूलो योगदान छ!
नेपाल राज्यको आजसम्मको 'मोमेन्टम्' यो 'निर्माता पुस्ता' ले हामीलाई दिएको सौगात हो। इतिहासले सुम्पेको राष्ट्र–राज्य (नेशन–स्टेट) को वजन र सम्भावना उनीहरूले बुझे, र सार्वभौमिकताको सौगातलाई आत्मसात् गर्दै यो भूगोल फलिफापको माध्यम बनोस् भनेर लागे।
केदार शर्मा मंगलबार, माघ ४, २०७३
रुपा जोशी आइतबार, माघ २, २०७३
शरच्चन्द्र वस्ती आइतबार, माघ २, २०७३
नेपाली भाषाले आजसम्म पाएका सबैभन्दा बहुमूल्य रत्न हुन्– कमलमणि । सबै भाषाले यस्ता मणि पाउँदैनन्, पाउनेले पनि एउटा भन्दा बढी पाउँदैनन् ।
कमलमणि सबै कुुरा सहन तयार थिए– आफ्नै अपमान पनि; तर भाषाको अपमान र अवमूल्यन सहन तयार थिएनन् ।
मीना शर्मा सोमबार, पुस २५, २०७३
यो अढाई महिनामा म पुगेका सदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका हिमाल, पहाड र तराईका जिल्लाहरु बाजुरा, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, सुर्खेत, दैलेख, बाँके, दाङ, सल्यान, रुकुम, प्युठानलगायतका गाउँमा महिलाले गरेको काम देख्दै मुटु चिमोट्ने छ ।
सञ्जीव शर्मा शनिबार, पुस २३, २०७३
सीमान्तकृत जातजातिको अधिकार आन्दोलनमा होमिएका ३९ वर्षीय ज्ञानबहादुर बोटे नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको उपाध्यक्ष पनि बने, एक कार्यकाल। तिनै बोटे अहिले नवलपरासीको नारायणी किनारमा पर्यटकहरुलाई 'बोटे स्वाद' चखाइरहेका छन्।
केदार शर्मा आइतबार, पुस १७, २०७३
अक्षरका अथक साधक
हिमालखबर आइतबार, पुस १७, २०७३
नेपाली भाषा साहित्यका अविश्रान्त साधक कमलमणि दीक्षितलाई कसरी जीवित बनाइराख्ने भन्ने जिम्मा हाम्रो पनि हो ।
दादा, त्यहाँ इमेल चल्दैन ?
उहाँ अन्तिम समयसम्म पनि किताब लेखिरहनुभएको थियो, त्यसबारे पीर मानिरहनुभएको थियो र इमेलबाट सम्पादकसित सम्पर्क गरिरहनुभएको थियो ।
हामी कहिलेकाहीं एकअर्कासित असहमत भइरहन्थ्यौं । जाँदाजाँदै दादाले असहमत हुने अर्को ठाउँ दिएर जानुभयो ।
शुक्रसागर बुधबार, पुस ६, २०७३
चिया उम्लिंदै गर्दा एंगेला सिमान्सले सानो शिशी निकालेर त्यसबाट सेतो धूलो हत्केलामा थापेर चाट्न थालिन्। के हो भनेर सोध्दा उनले जर्मन भाषामा भनिन्– “इख इस्से साल्ज...।”
म झसंग भएँ। मकै छर्न जाँदा बाजेसँग खाएको खाजा र त्यो थान्सिङे भरियाको शत् लाग्ने टोपी सम्झें। विचरा मेरा बाजे र ती थान्सिङे मामाले भन्न जानेनन्, तर दुवैलाई विज्ञान थाहा रहेछ।
जनतालाई नूनसम्म खुवाउन नसक्ने सरकारलाई के भन्नु र खै!
मनका राजाः जिग्मे परवल बिष्ट
वसन्त महर्जन शुक्रबार, पुस १, २०७३
राजाको पद नरहे पनि पूर्व मुस्ताङी राजा जिग्मे परवल बिष्ट स्थानीयका मनमा राज गरिरहेका थिए ।
मुर्माटप पुगेर रारा हेर्दा (तस्वीरहरु)
मीना शर्मा आइतबार, मंसिर २६, २०७३
५.१ किमि लामो, २.७ किमि चौडा र १६७ मिटर गहिरो रारासँगै पूरा रामसार क्षेत्रको पूर्ण सौन्दर्य नियाल्न मुर्माटपसम्म उक्लनुपर्छ । समुद्र सतहबाट ३ हजार ६३० मिटर उँचाइमा रहेको मुर्माटप टावरबाट २ हजार ९७२ मिटरमा अवस्थित राराको सौन्दर्य छचल्किएको देखिन्छ ।
गोठमा हुर्कंदैछ एउटा पुस्ता
मीना शर्मा सोमबार, मंसिर २०, २०७३
अन्धविश्वासमा जकडिएको बाजुरा, हुम्ला र मुगुका दुर्गम गाउँहरूमा महिलाले बाहिरी दुनियाँको लागि अकल्पनीय अवस्था भोगिरहेका छन् ।
डा. तीर्थबहादुर श्रेष्ठ बुधबार, मंसिर ८, २०७३